Sagalee Warra Sagalee hin Qabneef Haa Taanu!! – Kichuu
HomeNewsSagalee Warra Sagalee hin Qabneef Haa Taanu!!
Sagalee Warra Sagalee hin Qabneef Haa Taanu!!
#Sagalee Warra Sagalee hin Qabneef Haa Taanu
(By Abdi Charchar)
Tajaajilaa Bilbilaa fi Internet Godinoota Oromiyaa Lixaa Fi Kibbaatti Badee Deebi’u Qaba. Yoo rakkoon kun hin Fuŕamne ummanni keenya Hubannoo Dhukkuba #Koronaa Vayirasii kanaa argachuu hin Dandeenyef salphatti Miidhamuu danda’uu.
Motummaas Ta’e #Ethio_Telecom odeeffannoo argachuun Hangam miidhaa dhukkuba kana Baraaruun Barbaachisaa akka ta’e osoo Beekani Ummataa kana caalatti rakkoof saaxiluuf hojjechuun Gocha Diinummatti.
#Ummanni Godinoota Wallagga afran,Gujii lamanu ,Booranaa fi aanoolen Godina Shawaa kan wallagaan Wal daangessan kessatti kan argaman Dhala namatti. Kanaafuu akka Dhala namatti mirgaa odeeffannoo argachuu fi Fayyaa ofii eeggachuu qabu.
Obboleyyan Keenyaaf Sagalee Haa Taanuun dhaamsa kiyya. Hundi keenya hanga Dandeenyeen rakkoo ummataa keenya kana akka rakkoo keenyaatti Fudhanne Bira Haa Dhaabbanu.
Yeroo dhibee hamaan Addunyaa yaaddessaa jiru kanatti tajaajila odeeffannoo ummata irraa addaan kutuufi mana hidhaa keessatti uummata ukkaamsuun dhibichi akka babal’atu gochuudha.
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irra kenname
Yeroo Ammaa guutuu Addunyaaf yaaddoo kan tahe dhukkubni COVID-19 jedhamu ummata Addunyaa kanaa akka baalaa harcaasaa jiraachuu namuu quba qaba.
Dhukkubni kun Biyya chaayinaatti haa eegalu malee deemsa keessa Addunyaa guutuu gahee biyyoota hunda yaaddoo hamtuu keessa galchee jira.
karaaleen daddarba dhukkuba kanaa baayyee yaaddessaa tahuun immoo Ogeessota fayyaa Addunyaa dabalatee WHOtti yaaddoo hamtuu taheera.
COVID-19 karaalee hanga ammaatti dhukkubootni daddarbu jedhamee hin eegamne nagaa harkaan wal gaafachuun akka daddarbu erga baramee Addunyaan yaaddoo hamtuuf saaxilamuu irraan kan ka’e Ogeessota Addunyaa kanaa dabalatee WHO akka namni harkaan nagaa wal hin gaafanne ummata hundaan barsiisaa ykn hubachiisaa jiru.
Biyyoota dhukkubni kun keessatti argame ykn Mul’ataa jiru jedhamu hunda USA dabalatee manneen barnootaa fi Manneen Amantii akkasumas waajjiraaleen ummatni keessatti heddummatu bakkeewwan bashannanaa akka hojii idilee isaanii cufan beeksisaniiru.
Gara biyya keenya Itoophiyaatti yeroo dhufnus dhukkuba kana ittisuuf haal dureewwan tokko tokko gochaa turre ittis jirra jedhus mootummaan guyyaa har’aa MM Dr Abiyyiin guyyoota 15 fuuldura keenya jiran manneen barnootaa yuuniversitiilee dabalatee wal gahiileen kamuu akka hin adeemsifamne akkasumas taphoonni kubbaa miilaa fi kanneen biroon spoortiin akka dhaabbatu beeksisanii jiru.
Tarkaanfii mootummaan Ethiopia fudhate waan jajjabeessamu tahus garuu ammas ummatni keenya dachee Oromiyaa irra jiraatu harki caalaan odeessa kanas tahe karaalee dhukkubni COVID-19 jedhamu daddarbuu fi mala ittisa isaa dhagahaa hin jiran.
Sababaan isaa immoo mootummaan Command post seeraan hin labsamne ummata lixaa fi kibba Oromiyaatti erga labsee uggura bilbilaa fi interneetaa addaan kutuun dhibee COVID-19 jedhamu dhagahuu miti ofiifuu uummatni maal keessa akka jiru wal quba hin qabu.
Yeroo Ammaa kana dhukkubni Addunyaa yaaddessaa jiru kun biyya keenya keessa erga seenee bubbulus guyyoota lama dura mootummaan akka ifatti biyya seene beeksisee jira.
Hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti namootni qabatamaan dhukkubni kun irratti argame 5 tahuu fi dhukkuba kanaan shakkamanii warreen adda baafaman immoo itti gaafatamaa waajjira BBO Dr Tolaa Barisoo dabalatee namoota 183 ol tahuu mootummaan ifa godhee yeroo jirutti Nuyi Qeerroo Bilisummaa Oromoos yaaddessaa waan jiruuf mootummaan karaalee ummatni keenya ittiin of eeggachuu dandahan akkuma midiyaaleen biyya keessaa fi alaa gabaasaa jiran akka dhagahanii of eeggataniif bakkoota rakkoon bilbilaa fi internet addaan citee jiru hatattamaan lakkisuun ummatni keenya odeessa dhukkuba Addunyaa yaaddessaa jiru kana akka hubannoo gahaa argatanii irraa of eeggachuu qaban furmaata gochuu qaba jennee cimsinee ni gaafanna.
Akkasumas Ilmaan Oromoo yakka tokko malee Oromummaa isaaniif jecha yakkamaa tahanii manneen hidhaa beekamoo fi dhokatootti dararamaa jiranis haal duree tokko malee akka lakkifaman ni gaafanna.
Ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran mana tokko keessatti hedduminaan ugguramanii waan jiraniif mala dhukkubni COVID-19 kun ittiin daddarbu keessaa immoo inni guddaan bakka ummatni walitti baay’atee jiru afuuraan waan daddarbuuf kana furuuf saffisaan hidhamtoota siyaasaa Oromoos tahe namoota yakki isaanii sassalphaa tahe rakkoon kun osoon mudatiin dursee hiikuu qaba jennee waan amannuuf akka Qeerroo Bilisummaa Oromootti kanas mootummaa biyya bulchaa jiru cimsinee akeekkachiifna.
Maayii irratti yerootti Addunyaan balalii xiyyaaraa bakkoota hedduu of irraa dhorkaa jirtutti biyyi keenya Itoophiyaa garuu bakka ka’umsa COVID-19 kan taate Chaayinaatti illee tajaajila balalii addaan hin kutiin jiraachuun isaa immoo ammas eegumsa mootummaan kun ummata isaaf godhuuf yaade gadi aanaa tahee waan nutti argameef saffisaan akka addaan kutu gaafachaa namoota dhukkuba kanaan shakkaman akka MM Abiyyiin “mallattooleen COVID-19 isin irratti yoo mul’ate manaa gadin bahiinaa mana taa’aa” jedhe sana osoon taane namoota dhukkubni kun irratti mul’atu akka saffisaan gara mana yaalaa isaaniif qophaayetti geeffamanii wal’aansa gahaa godhamuuf ni gaafanna.
Ummata keenya Saba bal’aa Oromoofis nagaa isaaniif hawwaa balaa amma Addunyaa mudatee jiru kanas of eeggannoo godhamuu qaba godhanii akka of tiksan waamicha keenya dhiyyeessinaaf.
Biiroon Fayya Oromiyaa Hoogganaa Cimaa hin qabu. Hooggantoota isa gara Federaala jijjiramee jira. Itti aanaanis hojii irra akka hin jirre gabaafamaa jira. Naannoo Oromiyaa, Yeroo kanatti ogeessa cimaa fi hoogganaa Ummataaf quuqama qabu kan akka Dr. Nuredin Luke akka muudamu Campaign godhuu qabna. Dhibeen Koroonaa kunis CASE hedduun isaa madda isaa kan godhate (EPICENTER) Oromiyaa dha. Dabalataanis, Finfiinnee wiirtuu imaltoota addunyaa tahuu isii fi handhuura oromiyaatti argamuun isiis OROMIYAAN sadarkaan saaxilamuu (RISK LEVEL) isaa ol’aanaa dha. Lammiin Jaappan Godina Arsii tures namoota heddu waliin turee jira. Qophiin akka naannootti godhamu ciminaan hordoffii fi qophii adda taheen gaggeeffamuu qaba. Hospitaali yaalii dhibee Koroonaatiif Oromiyaa keessatti lapsame hin jiru. Naanoo Tigraay Hospitaala waldhaansa Koronaaf oolu qopheesse jira. Dhimma siyaasaa yeroo dhaabne dhimma fayyummaa Nageenya Ummata keenyaaf Haa hojjannu!
Biroon Barnoota Oromiyaattiif
#Dhibeen Koronaa Vayirasii Yeroo amma kana Biyya Dabalatee Guutuu Addunyaatti lubbuu namoota baay’ee Galafachuuni fi #saffisaan Tamsa’uun Yaadoo Guddaa Uumaa jira.
Dhukkubni kun Guyyaa Lamaan kana kessatti namoota 4 irratti muldhachuun fi 117 shakkamuun isaa karaa #Institute Fayyaa Hawasa itiyoopiyattin ifa ta’eera.
#Sochii Lammii Japaan kan ka’uumsa sababa dhukkuba kanaa Naannoo keenya kessatti akka godhaa turee fi Namoota Heddu qunnamuu isaa shakkii Guddaatu jira.
Ta’amsa’na Dhukkuba kanaa Naannoo keenya kessatti dhufu hirdhisuuf jecha #manneen barnootaa naannoo keenya kessatti argaman hunda yeroodhaaf dhabuun baay’ee barbaachisaa.
Yeroodhaaf mana Barnoota cufuun kun tamsa’ina dhukkubaa Hirdhisuu Qofa osoo hin Taane yaadoo hawaasni keenya kessatti kufee jiru kana hirdhisuu keessatti shoora ol’aanaa taphata. Kessattu #Namichi biyya alaa kan amma dhukkuba kanaan qabamuun isaa mirkanaa’e kun namoota lakkofsi isaa hin beekkamne waliin walqunnamuun isaa hawasa keenya kessatti #shakkii fi yaadoo uumeera.
Ijooleen Mana barnootaa kessatti offeeggannoo gahaa godhuu dhabuu irraa kan ka’e haala salphatti hubamuuu danda’uu. itti Dabalataan Manneen Barnoota baay’ee kessatti #bishaan ittin dhiqatan miti kan dhuganuu rakkoo dha. #Bakka rakkoon akkana kun jirutti #Tamsa‘uun dhukkuba kanaa baay’ee ol’aanaa ta’uun isaa tilmaamuun nama hin dhibu.
Kanaafuu Biiroo Barnoota Oromiyaa Rakkoo Dhukkubni kun Guyyaa Guyyaan Fidaa Jiru kanaa fi #Yaadoo Hawaasni keenya kessatti kufee jiru kana Hubachuun #manneen naannoo keenya kessatti argaman hunda yeroodhaaf akka Dhaabbatu Godhuun Naannoo keenya Akka Bararamuuf #Dirqama akka Bahuuf #Maqaa Ummata Naannoo keenyaatyin Kabajaan Gaafanna.
Bit 15 Bara 2020
Jaal Abdii Raggaasaa guyyaa har’aa mana murtiitti dhiyaate.
ዲያቆን ዳንኤል ስለፖርላማው ተናገረ Danel Kibret, Ethiopian Orthodox Church, Addis Ababa Mayor, Takele Uma,